Amerika Atsimo ~ Journey-Assist - Famaritana fohy sy voafaritra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Amerika Atsimo
Firenena amerikanina atsimo
Asongadina ireo firenena malaza indrindra amin'ny fizahan-tany loko
Fampahalalana fampidirana momba ny faritra
Kolontsaina sy fisintonana
I Amerika Atsimo dia iray amin'ny kontinanta roa an'ny Amerika. Any amin'ny faritra atsimo sy ampahany amin'ny hemisphers avaratry ny Tany, tanteraka amin'ny andrefana. Sasa amin'ny ranon'ny ranomasimbe roa izy: ny Pasifika sy ny Atlantika, ary ny Ranomasina Karaiba.
Ny halavan'ny tanibe atsimo Amerika dia 7350 km avy any avaratra mankany atsimo ary 5180 km avy any andrefana mankany atsinanana. Faritra - 17,8 tapitrisa km. Amerika Atsimo no kaontinanta fahefatra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny fahitana ny tanibe dia naterak'i Christopher Columbus tamin'ny 1492, izay nandinika ny tany Mainland hita. Ny anarana hoe "America" ​​dia namboarina ho fanomezam-boninahitra an'i Amerigo Vispucci, mpandehandeha izay nanolo-kevitra ny hahita tany vaovao nataon'i Columbus.
Ny fiteny any Amerika Atsimo dia portogey, espaniola, anglisy, holandey, frantsay, italiana, arabo ary fiteny indianina ampolony.
Ny haavon'ny avo indrindra any Amerika Atsimo dia ny Mount Aconcagua (Argentina), 6 m.
Ny mponina dia 387 tapitrisa.
Ny tanàna be mponina indrindra any Amerika Atsimo dia São Paulo (Brezila), olona 19,9 tapitrisa.
Ny firenena be mponina indrindra any Amerika Atsimo dia Brezila, izay misy olona 201 tapitrisa.
- Avaratra - Cape Gallinas;
- atsimo (tanibe) - Cape Froward;
- atsimo (nosy) - Cape Horn;
- tandrefana - cape Parignas;
- atsinanana - Cape Cabo Branco.
Amin'ny alàlan'ny fanamaivanana, dia azo zaraina ho any amin'ny Tendrombohitra West sy ny Plain East i Amerika Atsimo. Ao amin'ny velaran-tany midadasika amin'ity kaontinanta ity dia misy faribolana any Amazon, bees bees, ala be tsy manam-petra ary lemaka mahavokatra, faritra mahafinaritra amin'ny morontsiraka Pasifika sy Atlantika ary saika tsy misy aina.
Ny lakandranon'i Panama dia mizara indray mifandraika amin'ny alàlan'i Amerika Avaratra. Ny tsipika Drake manasaraka ny kaontinanta amin'ny Antartika.
Misy zona iklim 6 eto amin'ny kaontinanta: subequatorial (mitranga in-2), ekoatera, tropika, subtropika, antonony.
Ny renirano lehibe indrindra any Amerika Atsimo dia ny Amazon, 6400 XNUMX km, izay renirano lehibe indrindra eto an-tany. Renirano hafa avy amin'ny kaontinanta: Parana, Paraguay, Uruguay, Orinoco. Ny farihy lehibe indrindra dia Maracaibo. Ny nosy amoron-tsiraka tena malaza dia ny Tierra del Fuego, Nosy Falkland, Lesser Antilles, Galapagos.
I Venezoela dia manana riandrano avo indrindra eto an-tany - Angel, izay misy haavony mihoatra ny 1000 m.Ny riandrano mahery vaika - Iguazu no hita ao amin'ny sisin-tanin'i Brezila sy Arzantina.
Manan-karena mineraly ny tanibe: harena an-tsolika, orana vy, tsy ferrous ary mendri-kaja metaly mendri-kaja.
Ny tontolon'ny fambolena an'i Amerika Atsimo dia raisina tsara amin'ny maha-harena ny tanibe. Zavamaniry toy ny voatabia, ovy, katsaka, hazo sôkôla, hazo goma hita hita teto.
Ny ala tropikaly malefaka ao amin'ny faritra avaratry ny kaontinanta dia mbola gaga amin'ny harena be karazana, ary ankehitriny dia mbola manohy mahita karazana zavamaniry vaovao ny mpahay siansa ankehitriny. Misy karazana hazo 10 ary voninkazo 750 isaky ny 1500 kilometatra toradroa amin'ity ala ity. Ny hazo quebracho dia maniry ao amin'ny savannah, izay malaza amin'ny hazo mafy ary tena matevina - akora sarobidy sy lafo vidy.
Any amin'ny ala tropikaly any Amerika Atsimo, ny valan-javaboary mahavariana dia hita, ny vorona kely goavambe kely indrindra eto an-tany, ny amphibiana betsaka, anisan'izany ny sahona, biby mandady, misy anacondas lehibe, ny rodent capybara lehibe indrindra, izao, tapir, jaguar, renirano mikoriana. Amin'ny alina any anaty ala dia mihaza ny saka o bibidia dia mitovy amin'ny leoparda, fa Amerika ihany no hita. Ny môtô, armadillos, ny ostrit dia miaina amin'ny savandro, indrindra ny rodents eny amin'ny lampihazo.
Maherin'ny 5% -n'ny mponina manerantany (387 tapitrisa) no mipetraka any Amerika Atsimo. Izy io dia ahitana ny solontena avy amin'ny foko isan-karazany - ny Amerikana (teratany - teratany), kaokazy (taranaky ny mpifindra monina avy any Eropa), Negroid (taranaky ny andevo haondrana avy any Afrika), ary koa ireo vondrona maro mifangaro - mestizos, mulattos, sambo. Ny fifangaroana ara-poko any amin'ireo firenena any Amerika Atsimo dia mitohy haingana, ary misy karazana firazanana vaovao tsikelikely.
Ny fiteny ofisialy amin'ny ankamaroan'ny fanjakana amerikanina atsimo dia espaniola, Breziliana dia Portogey. Amin'ireo fiteny amerikana Native, ny fiteny ofisialy irery dia i Quechua any Peroa.
Katolika ny ankamaroan'ny mpino any Amerika Atsimo. Amin'ireo Karana, ny haino aman-jery taloha finoana Kristiana dia manana anjara toerana lehibe, eo amin'ny Negroes sasany no tafavoaka amin'ny kolontsaina afrikanina, ary eo anelanelan'ny ireo vondrona Indianina sasany dia tafavoaka tamin'ny finoana sy fomban-drazana talohan'ny kristianina.
Any Amerika Atsimo maoderina, firenena sy faritany 15 no manavaka, 12 amin'izy ireo no fanjakana manana fiandrianam-po:
̶ Nosy Falkland (fananan'i Grande-Bretagne, nalain'i Arzantina);
̶ Guiana (fanan'i Frantsa);
̶ Georgia Andrefana sy ny Nosy Sandwich atsimo (fananan'ny UK).
Raha eo amin'ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena dia alain'ny vondrona firenena mandroso ny firenena rehetra.
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena dia ao amin'ny fitondrana ny mpitarika ny hetsika sosialista. Natsangana ny fikambanana MERCOSUR, ny vondron'olona Andean, izay manondro ny toekarena iraisana ara-toekarena sy ny politikam-piarovan-tena momba ny firenena, ny hetsika malalaka amin'ny olom-pirenena, ary ny fanesorana ireo adidy mahazatra.
Miorina amin'ny fitsipiky ny Vondrona Eropeana dia noforonina izy tamin'ny 2004 ary ny fikambanana UNASUR, izay mampiray hatrany amin'ny firenena rehetra any Amerika Atsimo dia mitohy.
Zava-boajanahary tsy manam-paharoa any Amerika Atsimo: riandrano Iguazu sy Angel, Amazon, Chile Torres del Paine National Park, Colca Canyon, izay lalina kokoa noho ny Grand Canyon, Lake Titicaca sy ny hafa. Eto ihany koa no misy ny haavon'ny volkano mavitrika manerantany - Mount Cotopaxi, 5897 metatra ny haavony.
Amerika atsimo no toerana nahaterahan'ireo sivilizasiona taloha ny foko indianina, ny urine, chichba ary ny urine, lova lehibe iray izay loharanom-pikarohana tsy misy farany ho an'ireo siantifika maoderina. Ireto ny sisa tavela amin'ny Machu Picchu, Teotihuacan, ny piramida any amin'ny Tendrombohitra Monte Albano, ny sisa tavela amin'ny tranon'ny Mayan any Tikal, ny sisan-dranon'i Tahin, ny "Atlanta" ao amin'ny tempoly any Tula sy ny hafa.
Ireo firenena ao amin'ny kaontinanta Amerikana Tatsimo dia manana ny fombany, ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina, izay misy fitoviana amin'ny eropeana, ary koa fiovaovna lehibe. Maro ny fialantsasatra isan-taona sy ny fety nipoitra avy amin'ireo fomba amam-panao indianina sy teratany Afrikanina, toy ny Fetibe Breziliana malaza manerantany sy dihy amerikanina Latina mirehitra.
Airtel (Airtel) - mpikirakira finday ao Sri Lanka
27.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Airtel (Airtel) - mpikirakira finday ao Sri Lanka tsy misy
Dialog (Dialog) - mpikirakira finday ao Sri Lanka
27.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Dialog (Dialogue) - Operator finday ao Sri Lanka tsy misy
DTAC (diTak) - mpandraharaha finday any Thailand
26.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny DTAC (diTak) - mpandraharaha finday any Thailand tsy misy
26.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny True Mobile (TrueMove) - mpandraharaha finday any Thailand tsy misy
25.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny AIS One-2-Call - mpandraharaha finday ao Thailand tsy misy
Indosat - Operator Mobile Bali
25.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Indosat - mpandraharaha finday Bali tsy misy
Axiata - Operator finday any Bali
25.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Axiata - mpandraharaha finday any Bali tsy misy
Telkomsel - mpandraharaha finday Bali
25.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Telkomsel - mpandraharaha finday Bali tsy misy
Nosy Koh Kham any Thailand
24.03.2020 / fanehoan-kevitra mankany amin'ny nosy Koh Kham any Thailand tsy misy
Fitaterana rano ao Bali
23.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny fitaterana rano ao Bali tsy misy
22.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny fitaterana any Bali tsy misy
Taxi, Tuk Tuki. Taxi Taxi sy Sangteo any Thailand
22.03.2020 / fanehoan-kevitra raha mirindra Taxi, Tuk-tuki. Taxi Taxi sy Sangteo any Thailand tsy misy
22.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Bus tany Thailand tsy misy
Rail in Thailand
22.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Railway any Thailand tsy misy
21.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny rakitsoratr'i Ko Mak tsy misy
21.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Ko Wai tsy misy
Ny nosy Ko Krok. Pattaya. Thailand
19.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Nosy Koh Croc. Pattaya. Thailand tsy misy